စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: အိမ်မက်နှင့် ပါတ်သက်သော နိမိတ်များ
အိမ်မက်နိမိတ်အတွက် မသိသေးသော သူများအတွက် အိပ်မက်နှင့် ပတ်သက်သော နိမိတ်များ (အိမ်မက်အမျိုးမျိုးနှင့်အသားလှုပ်နိမိတ်)စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြ ပေးထားပါသည်
အိပ်မက်ကို လူတိုင်းမက်သည်။ သို့သော မိမိတို့ အိပ်မက်၏ကောင်းကျိုး ဆိုး ကျိုးကို ကြိုတင်၍ သတိမထားသည့်အတွက် အကျိုးခံစားသင့်သော အရာ များလွဲချော်သွားသည်လည်း ရှိပေသည်။
မကောင်းကျိုးကို မခံစားရမီ ကြိုတင်၍ နိမိတ်အနေအထားအားဖြင့် အိပ်မက်မြင်မက်သည်ဖြစ်လျက် မိမိတို့၏ အိပ်မက်ကို သတိမမူ၍ ဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်၍ဖြစ်စေ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေသည့်အတွက် ဒုက္ခမတွေ့သင့်လဲနှင့် တွေ့ရတတ်သည်။
ဓာတ်လေချောက်ချား၍ မြင်မက်ခြင်းသည်လည်း ရှိတတ်၏။ ထိုအိပ်မက်ကို အမှန်မယူနိုင်ပါ။အကယ်၍ ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်ဖြင့် မြင်မက်သည်ဟု ယူဆမိလျှင် မိမိမြင်မက်သော အိပ်မက်၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ကို ဝေဖန်တတ်သူကို ရှာ၍ ထိုသူအား ပြောပြရမည်။
သို့မဟုတ် အိပ်မက်ဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ် တို့ကို ဖတ်၍ ဝေဖန်ချက်ချပြီးလျှင် ကောင်းကျိုးပေးမည့်အိပ်မက်ဖြစ်က ပေး ရန် အချိန်ကာလကို စောင့်ဆိုင်းလျက်အထူး သတိနှင့် နေရမည်။ ဆိုးကျိုးေ ပးမည့် အိပ်မက်ဖြစ်က ထိုပေးလတ္တံ့သော အကျိုးကို မပေးရန် အဟောသိ ကံ ဖြစ်သွားအောင် ရတနာသုံးပါး၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘွားမိဘတို့ကိုကိုးကွယ် ဆည်းကပ်၍ ယတြာများဆင်ရပေမည်။
အိပ်မက်၊ အ တိတ်၊ နိမိတ်၊ တဘောင်၊ စနည်း၊ ဂြိုလ်စာ သက်ရောက်အစရှိသည်တို့ကို မယုံ ကြည့်တတ်လျှင် မိစ္ဆာဒိဠိဖြစ်တတ်၏။ ထို့ကြောင့် "ငါ့အား အ,ကုသိုလ် ကံအကျိုးပေးလို၍ မကောင်းသောအိပ်မက် စသည်တို့ မြင်လာကုန်သည်။ ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို၍ ကောင်းသော အိပ်မက် စသည်တို့ မြင်လာ ကုန်သည်။
ဤသို့ ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်ဖြင့် ကံကို အရင်းထား၍ ယုံကြည်ရ မည်"ဟု ပညာရှိတို့ မိန့်တော်မူကြ၏။ ထို့ကြောင့် အိပ်မက်များအားကံကို အရင်းထား၍ ယုံကြည်ကြပါလေ။
Posted by Tuumar at 10:00 am
Labels: အိမ်မက်အဟော အသားလှုပ် နိမိတ်ကျမ်းနှင့်ဥယျာဉ်
mstint 15 December 2012 at 11:59
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရေးသားမျှဝေထားတဲ့ အိမ်မက် နိမိတ်တွေ ဖတ်သွားတယ်နော်။ တီတင့်တောင် အိပ်မက် မမက်တော့တာ ကြာနေပြီး)
Tuumar 18 December 2012 at 13:22
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မက် နိမိတ်တွေ ရေးသားတင်ပြသွားတဲ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Phyu Phyu 15 December 2012 at 16:43
အစ်မ အများကြီးဘဲ ရေးလိုက်ရတာ တော်တော် လက်ညောင်းသွားမှာဘဲနော်..
အိပ်မက် အဟောလေး တွေဖတ်ရလို့ ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ်.. ^_^
Tuumar 18 December 2012 at 13:23
Anonymous 11 April 2013 at 10:24
ဗဟုသုတ ရပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါ
Thamee Su 15 December 2012 at 18:53
မမမာရေ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဒီ post လေးကို bookmark လုပ်လိုက်ပြီ အိပ်မက်မက်တိုင်းဖတ်ရအောင်
Unknown 19 December 2012 at 20:32
Thanks ma ma...
Tuumar 18 October 2017 at 10:41
Tuumar 18 October 2017 at 10:42
Anonymous6April 2013 at 13:51
Tuumar 18 October 2017 at 10:43
Anonymous 18 October 2014 at 02:45
Thank you ma ma
Anonymous 27 November 2014 at 04:13
Unknown 15 October 2017 at 14:28
Unknown 15 October 2017 at 14:26
Thank You For This Post, The Nature Of Dream.
May You Be Happy And Peaceful In Your Thehole Life.
Tuumar 18 October 2017 at 10:45